လမ်းကြောင်းမော်ကွန်းတိုက် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
Atomos သည် Canon EOS R4 နှင့် EOS R10 မှ 422K 5-bit6ProRes သို့မဟုတ် DNx မှတ်တမ်းတင်ထားသည်
Zixi နှင့် Cloud-based Video Delivery များအတွက်သဟဇာတပါတနာ
အသံလွှင့်မီဒီယာဝါရင့် Greg Doggett သည် TVU ကွန်ယက်များတွင်အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအရောင်းစွမ်းရည်နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်
Blackmagic ဒီဇိုင်းသည် ATEM အဆင့်မြင့် panel အသစ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်
RUSHWORKS သည်လူနေအိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကရိယာပစ္စည်းကိရိယာကိုထုတ်ပေးသည်
MediaKind သည် Matt McConnell အားအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်သည်
SonyLIV နှင့် NetRange တို့သည်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများတိုးချဲ့ရန်
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: Routing
Rascular သည် RDeMaster Ultra-Fast Switching Upgrade ဖြင့် NDI အတွက်၎င်း၏ကိရိယာများကိုချဲ့ထွင်သည်
Third-party ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗွီဒီယိုနည်းပညာများအတွက် software အခြေခံသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း application များကိုဒီဇိုင်းပညာရှင် Rascular သည်၎င်း၏အားကောင်းသော RouteMaster router control application ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီး NewTek's NDI စီးကြောင်းများအတွက်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူ၎င်း၏ virtual routing capacity ကိုတိုးချဲ့လိုက်သည်။ အသုံးပြုသူအသစ်မျက်နှာပြင် ယခုအခါ RouteMaster သည်စျေးကွက် ဦး ဆောင်သည့် NDI အလွန်လျင်မြန်သော switching စွမ်းရည်များကြောင့်သုံးစွဲသူများအား on-air routing solution ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ...
Compact, software ဗဟိုပြုတပ်ဆင်ခြင်းသည်ဗဟိုအလုပ်အသွားအလာများမှတဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိသည်။ DUBAI, ဇွန် ၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ - ဆော်ဒီအသံလွှင့်ဌာန (ဆော်ဒီအသံလွှင့်ဌာန) သည်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရှိမီဒီယာ ၀ န်ကြီးဌာန၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသရှိနာမည်အကြီးဆုံးထုတ်လွှင့်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည့် SBA သည် ...
Automation တွင် TIME-of-နေ့နှင့်လက်စွဲစာအုပ် SDI / NEWTEK NDI® router CONTROL standalone APPLICATION သို့ Clockwork နဲ့အတူ
အများအပြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်-တန်းဟာ့ဒ်ဝဲထိန်းချုပ်မှုပြားကဲ့သို့တူညီသောစျေးနှုန်းအဘို့, Rascular, Third-party များအတွက်လက်စွဲစာအုပ်နှင့်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု applications များ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကဗီဒီယိုနည်းပညာများ၏ဒီဇိုင်နာများ, Clockwork ဖန်တီးထားသည်။ ဤသည် SDI နှင့် Newtek NDI®ဖြတ်ပြီး automated ၏နေ့အချိန်နှင့်အပြည့်အဝကို manual ဗွီဒီယိုနဲ့အသံ router ကိုထိန်းချုပ်နှစ်ဦးစလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့-to-အသုံးပြုမှု, ကို standalone ကို PC-based application ဖြစ်ပါတယ်။ Clockwork ဆန္ဒပြပွဲများ Rascular ရဲ့ရပ်တည်ချက် 6.C19 အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် ...
RASCULAR NEW ROUTEMASTER Lite ကိုသုံးပြီး NEWTEK'S NDI ရဲ့ IP PROTOCOL ကူးပြောင်းနေရာ
Rascular, PC ကို-based နဲ့ web panel က device ကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ software ကိုဒီဇိုင်နာများ, က compressed ဗီဒီယိုကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အနာဂတ်ရန်၎င်း၏အရေးပါပုံကိုအသိအမှတ်ပြု, NewTek ရဲ့ NDI ကဗီဒီယို-over-IP ကို ​​protocol ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမူကြောင်းကိုကြေညာလိုက်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏ပထမဦးဆုံးအလိုက်ဖက်ထုတ်ကုန်တွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ် : RouteMaster Lite ကို။ M2018 - RouteMaster Lite ကိုပု DigiBox ရပ်တည်ချက်အပေါ် BVE 44 မှာပြပွဲအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ NewTek အဖြစ် ...
utah သိပ္ပံ Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအိုင်ပီ Solutions Developing
SALT LAKE CITY - ဇွန်လ 26, 2017 - Utah သိပ္ပံက IP ကို-based စစ်ဆင်ရေးမှရွှေ့ပြောင်း '' ထုတ်လွှင့်ဖောက်သည်များဖြေလျှော့ဖို့ switching ပလက်ဖောင်း '' Arista ကွန်ယက်နှင့်အတူ Utah သိပ္ပံရဲ့အဆင့်မြင့် hybrid Router ကနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ကြောင့်လာမယ့်မျိုးဆက်ဖြေရှင်းနည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလုပ်လုပ်ကြေညာခဲ့သည်။ "Utah သိပ္ပံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' လက်ရှိ SDI Workflows ကိုထောကျပံ့ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကိုဆောငျကွဉျးကိုကူညီနိုင်ကြောင်းဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲမှကျူးလွန်နေ ...
Riedel MediorNet စပိန်ရဲ့ Gran Hermano VIP '' ( 'Big Brother VIP') များအတွက်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့် redundancy အချက်ပြလမ်းကြောင်းပေး
WUPPERTAL, ဂျာမနီ - မတ်လ။ 23, 2017 - Riedel ဆက်သွယ်ရေး '' MediorNet Real-time ကွန်ရက်ကလူကြိုက်များစပိန်အဖြစ်မှန်ပြပွဲ "Gran Hermano VIP" ( "Big Brother VIP") ၏ပဉ္စမရာသီအတွက်အရေးပါသောနောက်ကွယ်က-The-မြင်ကွင်းများကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ MediorNet 70 ကင်မရာများထက်ပိုမှဗီဒီယိုရွေ့လျား, မက်ဒရစ်မြို့အနီး on-တည်နေရာ Gran Hermano VIP အိမ်များအတွက်မလိုအပ်တဲ့နှင့်ကျတ် signal ကိုလမ်းကြောင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံကိုထောက်ပံ့ပေး ...
HD ကိုအသံလွှင့်ရဲ့အဆင့်မြှင့် HD1 များအတွက် Riedel MediorNet အင်အားကြီးနိုင်ငံများကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံ
WUPPERTAL, ဂျာမနီ - ဇန်နဝါရီ 17, 2017 - HD ကိုအသံလွှင့်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြင်ပမှာအသံလွှင့် (OB) ဝန်ဆောင်မှုများကိုအဓိကဂျာမန်ပံ့ပိုးပေး, Riedel ဆက်သွယ်ရေး '' MediorNet Real-time ကွန်ယက်က၎င်း၏ HD1 မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုထရပ်ကားအဆင့်မြှင့်ထားပါတယ်။ သုံး MediorNet Compact Pro ကိုဘောင်နှင့်ခြောက်လ Riedel Micron High-density ကိုမီဒီယာဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်ကိုထုတ်ကုန်တစ်ခုဖန်တီးရန် 10 Gbps optical fiber ကိုကွန်ယက်ချိတ်ဆက်နေကြသည် ...
MediorNet ထိန်းချုပ်ရေး App ကို Riedel ရဲ့ SmartPanel တစ်ပြိုင်နက်လမ်းကြောင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးစှမျးကိုပေးသနား
WUPPERTAL, ဂျာမနီ - စက်တင်ဘာ 9, 2016 - ကုမ္ပဏီ၏ဆန်းသစ် RSP-2318 SmartPanel ဘက်စုံသုံး user interface ကိုများအတွက် MediorNet ထိန်းချုပ်ရေး App ကို၎င်း၏နိဒါန်းယနေ့နှင့်အတူ, Riedel ဆက်သွယ်ရေးဆက်သွယ်ရေးနှင့် Real-time မီဒီယာလမ်းကြောင်းများအကြားကွင်းဆက်ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံ control panel ထဲကသစ် MediorNet ထိန်းချုပ်ရေး App ကိုအဖြစ်တိုက်ရိုက် Riedel MediorNet မီဒီယာကွန်ရက်တစ်ခုထဲသို့ SmartPanel ချိတ်ဆက်အပြင် ...
1 ၏စာမျက်နှာ 1112345 » 10...နောက်ဆုံး»